ဆီမှက de Beauvoir ကိုးကား: Feminist, ဖြစ်တည်မှု
ဆီမှက de Beauvoir Quotes
ဆီမှက de Beauvoir (1908-1986)
ဆီမှက de Beauvoir တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲအပေါ်စာရေးဆရာ နဲ့ existentialism ။ သူမလည်း္ထုရေးသားခဲ့သည်။ သူမ၏စာအုပ်တွင် "ဒုတိယလိင် 'တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် အမျိုးသမီး ဂန္။ "လူ့" ဖြစ်ပါတယ်အရာကိုနှိုင်းယှဉ်ကြောင့်ဖြစ်သော "ဣတ္" လူနှင့်အမျိုးသမီးကွဲပြားခြားနားသောသဘောထားတွေရှိစေခြင်းငှါအနေဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီလူတစ်ဦးထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, သောစိတ်ကူးပေါ်အခြေခံပြီး, ထိုသို့သောအရာကို၏မျှော်လင့်ချက်များတစ်ဦးယူနီဖောင်းအစုံပြဌာန်းခဲ့သောယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပါသည် အထီးသည်အဘယ်အရာနှင့်အတူပမာဏမှာတူညီသည်။ Beauvoir အမျိုးသမီးတွေတစ်ဦးချင်းစီဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်စုပေါင်းအရေးယူမှတဆင့်မိမိတို့ကိုယ်လွတ်နိုင်သောစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။
အကောင်းဆုံးဆီမှက de Beauvoir ကိုးကားချက်များ
•မိန်းမသည်မိမိရန်သူတို့ကိုငြင်းပယ်ရန်, သူမကလူအားဖြင့်သမုတ်သောဆက်ဆံရေးမှသူမ၏အကျဉ်းချထားဖို့မငြင်းဆန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် emancipate စေရန်, သူမ၏သူမ၏လွတ်လပ်သောတည်ရှိပါစေနဲ့သူမလည်းသူ့ကိုမှမတည်ရှိရန်အဘယ်သူမျှလျော့နည်းဆက်လက်တော်မူမည် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဘာသာရပ်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအသိအမှတ်ပြု, တစ်ဦးချင်းစီရသေးအခြားတစ်ဦးကိုအခြားအဘို့ရှိနေပါဦးမည်။
•က Man အမျိုးသမီးအဖြစ်လူသားတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် - သူမကယောက်ျားတုပဖို့ဆိုပါတယ်လူသားတစ်ဦးဖြစ်တည်မှုအဖြစ်ပြုမူအခါတိုင်း။
•ကမ္ဘာ၏ကိုယ်စားပြုမှု, လောကီသားကိုယ်တိုင်ကကဲ့သို့ယောက်ျား၏အလုပ်ဖြစ်၏ သူတို့အကြွင်းမဲ့အာဏာအမှန်တရားနှင့်အတူရောထွေးထားတဲ့ရှုထောမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်, ကနေကိုဖော်ပြရန်။
•ယောက်ျား၏အများဆုံးစာနာအပြည့်အဝအမျိုးသမီး၏ concreted ခွအေနကေိုနားမလည်ခဲ့ပါဘူး။
• Society ကလူအားဖြင့်ပြဌာန်းထားကြောင်း, အမြိုးသမီးတယုတ်ညံ့ကြောင်းမိနျ့တျောမူ; သူမသာအထီးရဲ့သာလွန်ဖျက်ဆီးဖွငျ့ဤညံ့လို့အတူကွယ်ပျောက်လုပျနိုငျသညျ။
•ကြှနျုပျတို့အတူတူကအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်လျှို့ဝှက်၏တပြင်လုံးကိုစနစ်, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏ထက်ဝက်၏ကျွန်စနစ်ဖျက်သိမ်းသည့်အခါ, ထို့နောက်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏ "ဌာနခွဲ" သည်၎င်း၏စစ်မှန်သောအရေးပါမှုကိုဖော်ပြပါလိမ့်မယ်နဲ့လူ့စုံတွဲသည်၎င်း၏စစ်မှန်တဲ့ပုံစံကိုတွေ့လိမ့်မည်။
•ကြှနျုပျတို့မှတဆင့်သူမ၏ရှင်းပြဖို့လည်းကျဆင်းလျှင်အမျိုးသမီးအဖြစ်သူမ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ "ထာဝရဣတ္" အမျိုးသမီးတစ်ဦးသတ်မှတ်ဖို့လုံလောက်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျနော်တို့အမျိုးသမီးတွေမတည်ရှိပါဘူးအကြောင်း, ပြုရန်ယာယီသဘောတူညီချက်ရရှိထားပြီး, ဝန်ခံသို့ရာတွင်လျှင်, ကျွန်တော်မေးခွန်းရင်ဆိုင်ရရမယ်ဆိုပါက: ဘာလဲ မိန်းမတစ်ယောက်?
•အနည်းငယ်အလုပ်တွေကိုယင်း၏အဆုံးမဲ့အထပ်ထပ်နှင့်အတူပိုမိုဆစ်စဖှက်၏ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့တူအိမ်မှုကိစ္စထက်နေသောခေါင်းစဉ်: စင်ကြယ်, ကျော်နှင့်ကိုကျော်, သန့်ရှင်းလုပ်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့သည်ညစ်ညူးသည့်ညစ်ညူးဖြစ်လာသည်။
•အမှန်တရား Defending တဦးတည်းတာဝန်တစ်ခုအသိထဲကသို့မဟုတ်အပြစ်ရှိတယ်ရှုပ်ထွေးသောလျော့ပါးသက်သာစေရန်ရန်မ, ဒါပေမယ့်ကိုယ်နှိုက်ကတစ်ချသောဆုဖြစ်၏တစ်ခုခုမဟုတ်ပါ။
•ဒါကြောင့်ငါစစ်မှန်တဲ့ကျရောထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအရာကိုပါပဲ။ သင်သည်သင်၏အားလုံးပေး, ထိုသို့သင်တို့သည်အလျှင်းမကုန်ကျလျှင်အဖြစ်သေးသင်အမြဲခံစားရသည်။
• One ရဲ့ဘဝဤမျှကာလပတ်လုံးတစ်ဦးမေတ္တာ, ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု, အမျက်နှင့်သနားအားဖွငျ့, အခြားသူများ၏ဘဝအသက်တာတန်ဖိုး attributes အဖြစ်တန်ဖိုးကိုရှိပါတယ်။
•မူရင်းစာရေးဆရာ, သေလွန်သောသူတို့သည်မဟုတ်လျှင်, အရှုပ်တော်ပုံ, အမြဲထိတ်လန်ဖြစ်၏ အသစ်အဆန်းနှောင့်အယှက်များနှင့်တွန်းလှန်။
•သို့သော်ပတျဝနျးကငျြအခွအေန၏, ဤအခွက်နေဆဲ-မွေးဖွားလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သူသို့မဟုတ်သူမ၏အခွက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူသို့မဟုတ်သူမ၏လူမှုရေးအခြေအနေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမရနိုငျပါလျှင်တစ်ဦးချင်း, အစကတည်းကမှာလက်ဆောင်အဖြစ်။
•အနည်းငယ်သူတို့ကိုကျော်လွန်ပြီးသွားကြဖို့, သင့်စွမ်းရည်၏ကန့်သတ်ကျော်ဖြတ်ဖို့, သင့်စစ်မှန်တဲ့နိုင်စွမ်းတဲ့သဘော, အစဉ်မပြတ်ဖြစ်ပြီးပြသရန်: တီထွင်ရန်, ရှာ, ဝံ့ခြင်းငှါ၎င်း, ကသစ်ကိုအခွက်ထင်ရှားရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့်သဘောပေါက်ကြသည်ထိုကဲ့သို့သောယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မအသက် 21 ခဲ့သည်ကတည်းက•ငါအထီးကျန်ခဲ့ဖူးဘူး။ အစအဦးမှာငါ့ကိုခွင့်အခွင့်အလမ်းများငါ့ကိုပျော်ရွှင်ဘဝဦးတည်သွားစေရန်ငါမူကားဦးဆောင်သည့်အသက်တာ၌ပျော်ရွှင်ဖို့မသာကူညီပေးခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့ချို့ယွင်းချက်နှင့်ငါ့ကန့်သတ်သတိထားပါပြီ, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုငါရဲ့အကောင်းဆုံးပြီ။ ငါသည်ဤလောက၏ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ဘယ်သို့သောအားဖြင့်ညှဉ်းဆဲခံခဲ့ရသောအခါ, ငါကိုပြောင်းလဲချင်ခဲ့တယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာကြီးမ၌ငါ့နေရာအရပ်။
•သင်မွေးဖွားနေတဲ့နာရီ မှစ. သင်သည်အသေခံရန်စတင်။ သို့သော်ကလေးမွေးဖွားခြင်းနှင့်သေခြင်းတို့အကြားဘဝရှိပါတယ်။
•ယနေ့သင်၏အသက်တာပြောင်းလဲပါ။ နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ, ယခုအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်, အနာဂတ်အတွက်အပေါ်အလောင်းအစားမပြုပါနှင့်။
ရှေးသူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအတွင်းအခြားဖြစ်ပါသည်ကတည်းက•ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ပေါ်ထွန်းအပြင်ဘက် -from အခြားသူများထံမှကျွန်တော်တို့ကိုလာသင့်ကြောင်းသဘာဝပါပဲ။ ကျနော်တို့ကိုလိုလိုလားလားလက်ခံကြပါဘူး။
•ဘဝကနှစ်ဦးစလုံးကိုယ်နှိုက်ကကြူးနဲ့သူ့ဟာသူထက်သာလွန်၌သိမ်းပိုက်သည်, ကမအားလုံးကိုယ်နှိုက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်ပြီးလျှင်, အသကျရှငျသာအသေခံသည်မဟုတ်။
•ဒါကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်မျှသာသင်၏သားသမီးအထိမ်းအမှတ်ကြောင်းစဉ်းစားရန်စိတ်လှုပ်ရှားထိတ်ပါပဲ။ ဒါဟာမမျှတပုံရသည်။ သင်တို့ပြုသမျှကိုများအတွက်တာဝန်မယူဆနိုင်သည် - သို့မဟုတ်မလုပ်ကြပါဘူး။
•အိမ်တွင်းသို့မဟုတ်ရဲတိုက်ရှိမရှိပျော်ရွှင်မှုကို၏စံပြအမြဲ, အိမျတျော၌ပစ္စည်းပုံစံကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ဒါဟာကမ္ဘာမှမွဲနှင့်ခွဲခြာကိုဆိုလိုတာပါ။
• Society ကသာယခုအချိန်အထိသူအမြတ်အစွန်းဖြစ်တယ်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကိုဂရုစိုကျ။
•ငါအသင်္ချေထင်၏နိုငျဖြစ်ကြောင်းကို, သေးသောငါ finity ကိုလက်မခံကြဘူး။
•ကိုယ်နှိုက်မှာတော့လိင်တူဆက်ဆံခြင်းလိင်ကွဲအဖြစ်ကန့်သတ်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏: အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဦးသည်လူမေတ္တာရှင်နိုင်စွမ်းဖြစ်ဖြစ်သင့်; ကြောက်ရွံ့ခြင်း, ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း, ဒါမှမဟုတ်တာဝန် feeling မပါဘဲဖြစ်စေ, လူသားတစ်ဦးဖြစ်ခြင်း။
•အနုပညာရှင်ကသူပထမဦးဆုံးဖိနှိပ်သို့မဟုတ်ညှဉ်းဆဲတတ်သော, ဒီကမ္ဘာကြီးထဲမှာတည်ရှိပြီးနုတ်ထွက်သို့မဟုတ်ပုန်ကန်သောရမည်ဖြစ်သည်ဖော်ပြမယ့်ကမ္ဘာကြီးရှိသည်ဖို့အတှကျအမိန့်, လူတို့တွင်လူယောက်ျား၌။
•အဘယ်သူမျှမကိစ္စနောက်မှဖြစ်ပျက်ဘာမှငါ့ကိုပယ်သူတို့အားအချိန်လေးယူမယ်လို့ [လွတ်မြောက်ရေးနေ့အကြောင်း]; ဘာမျှမသူတို့ကိုမပယ်ရှားတော်မူပြီ သူတို့ကိုမှေးမှိန်ဖူးကြောင်းထက်မြက်နဲ့ငါ့အတိတ်ထဲမှာထွန်းလင်း။
ဆီမှက de Beauvoir အကြောင်း quotes
• [ဆီမှက de Beauvoir အပေါ်ကိတ် Millett] သူမသည်ကြှနျုပျတို့အတှကျတံခါးကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
• [ ဘက်တီ Friedan ဆီမှက de Beauvoir အပေါ်] ငါသူမ၏မှငါ့ကိုယ်ပိုင် existentialism သင်ယူခဲ့သည်။ ဒါဟာ ... ကြောင်းအဖြစ်မှန်ဖို့ချဉ်းကပ်မှုနှင့်နိုင်ငံရေးတာဝန်ဖို့ကျွန်မကိုမိတ်ဆက်သောဒုတိယအလိင်ခဲ့ [နဲ့] ငါအထောက်အကူပြုနိုင်ပါပြီအမျိုးသမီးဖြစ်တည်မှု၏ဘာပဲမူရင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ကျွန်မကိုဦးဆောင်ခေါ်သွားပါတယ်။
• [ဆီမှက de Beauvoir အပေါ်ဘက်တီ Friedan] ငါကောင်းစွာသူမ၏အလိုရှိ၏။ သူမသည်ကျနော်ရွေ့လျားစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်အရာအပေါ်တစ်ဦးလမ်းမပေါ်တွင်ငါ့ကိုထွက်တော့တာပဲ။ ။ ။ ။ ကျနော်တို့လိုအပ်ပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှန်တရားထက်မကအခြားအခွင့်အာဏာယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။
[• ဂလိုရီယာ Steinem ဆီမှက de Beauvoir အပေါ်] အခြားမည်သည့်တစ်ခုတည်းသောလူ့ဖြစ်လျက်ရှိထက်ပိုသူမကလက်ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှုများအတွက်တာဝန်ရှိပါတယ်။
အဲဒီ Quotes အကြောင်း
quote စုဆောင်းခြင်း Jones ဂျွန်ဆင် Lewis ကအားဖြင့်စုဝေးရောက်လာကြ၏။ Jones ဂျွန်ဆင် Lewis က©ဒီစုဆောင်းမှုနှင့်တစ်ခုလုံးကိုစုဆောင်းမှုထဲတွင်တစ်ခုချင်းစီကိုကိုးကားစာမျက်နှာ။ ဒါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကျော်စုဝေးကာအလွတ်သဘောစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ငါကကိုးကားနှင့်အတူစာရင်းမပြုလုပ်လျှင်ကိုယ့်မူရင်း source ကိုပေးနိုင်တော့မည်မဟုတ်သူဖြစ်ကြောင်းကိုနောင်တ။
Wilma ဟာ Mankiller
ယောဟန်သည်စတူးဝပ်စက်, အမျိုးသား Feminist
အီဂျစ်ဘုရင်မ Nefertiti ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Fife များ၏မင်းသမီး Louise, မင်းသမီးတော်ဝင်နှင့် Duchess
Barbara Walters ဂုဏ်ထူးက 100 အမျိုးသမီးများနေ့
Jacqueline Kennedy ကအိုနာဆစ် Quotes
Delphi အတွက် TYPE constant ကိုနားလည်ခြင်း
သင်က Netflix နဲ့အပေါ်စီးကြောင်းနိုင်သလား 20 အင်းဆက်ပိုးထိတ်လန့ရုပျရှငျမြား
ပိုမိုမြန်ဆန် Read လုပ်နည်း
အားလုံးအချိန်ထိပ်တန်း 10 စစ်ပွဲ, Movies
Bigfoot ဗီဒီယိုများ Sasquatch, Yeti နှင့်စကင့် ape
တစ်ဦးကောင်းသရုပ်ဖော်စာပိုဒ်ရေးထားနည်း5ဥပမာများ
ငါကိုအမြဲတမ်းမေတ္တာကို YouSong သမိုင်းမည်
ကို "နယူးအကြမ်းဖက်မှု" အကြောင်းကိုဒီတော့နယူးကဘာလဲ?
အဆိုပါအများစုမှာ Hilary အတုသတင်းများဆိုဒ်များ
အဆိုပါအလွန်အဖြစ်များသည့်ပြင်သစ် Expression ( 'သင်တန်းအမှတ်စဥ်၏') '' Bien Sur '' အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
ကျောင်းသားများကဘယ်လိုအများကြီး Homework မှဖူးသင့်သလော
လမျးဖွောငျ့လက်ဝဲဒါပေမယ့်မှ Going ဂေါက်သီး Shots: မကောင်းရင်နှင့်ပြင်ဆင်ချက်များ
သင့်ကျောင်းသရဲခြောက်တယ်လို့သည်ဆိုပါကအထဲက Find လုပ်နည်း